धर्म, शिक्षा र मानव सभ्यता – GadhiKhabar
धर्म, शिक्षा र मानव सभ्यता
२२ मंसिर २०७७, सोमबार १४:३२ Rajendra Rai	0 Comments
कसैलाई कुटनु पर्छ, मार्नु पर्छ, अनि आफ्नो सुरक्षा हुन्छ भन्ने संस्कारको विकास त्यहाँ बाट तब सुरू हुन्छ जहाँ सामाजिक संस्था धर्म र शिक्षा ले संरचनात्मक प्रकार्यवादका लागि आफ्नो नियमित कार्य गर्न नसकेको देखिन्छ । अर्थात धार्मिक संस्था र शैक्षिक संस्थाको स्वस्थ क्षमतामा ह्रास आउँछ, सन्तुलन गुमाउँछ, वा कार्यविमुख हुन्छ । तब यस्तो संस्कारको विकास हुन्छ। यसले निकट वा दुर भविष्यमा मानवता वा मानव सभ्यताले बोकेको सुन्दरता माथि कुरूपताको कालो पोतो पोत्ने निश्चित छ । मानिसहरू रहने त छन् । यो पृथ्वीमा तर त्यो सुन्दर मानवतावाद र मानव सभ्यता ध्वस्त हुनेछ ।
अरूको चोटमा मनोरञ्जन गर्ने आदतको विकास हुँदै जानु अन्यको दुखमा रमाउने घातक मनोवृत्ति वृद्धि हुँदै जानु अरूको चोटमा आफ्नो समस्या समाधान खोज्ने सोचको विकास हुदै जानु । अन्यको बगेको रगतमा आफ्नो मुक्ति देख्ने दृष्टिकोणमा रूपान्तर हुदै जानु । अर्काको मेहनत र पसिनामा आफ्नो नाफा र अतिरिक्त मूल्य खोज्ने शिक्षाले दिक्षीत हुदैजानु। अर्काको मृत्युमा आफ्नो जीवन देख्ने धर्मको विकास हुँदै जानू ले मानिस त रहला तर मानव सभ्यता र समाज कालान्तरमा संकटमा पर्न सक्छ ।
यस्तो स्वभाव सबै मानिसमा थोरै मात्रामा नहुने भने होइन जो प्राकृतिक हो। कसै अरूको प्रगति वा सुखमा कोही चाहिने भन्दा बढी दुखी हुनु र कसैको दुख वा मृत्युको खबरमा चाहिने भन्दा बढी रमाउनु भनेको गहिरो मनोरोग हो । भ्रष्टाचार, अनैतिकता, असमानता, विभेद, शोषण वा विभिन्न राजनितीक, सामाजिक, व्यक्तिगत घटनाले प्रेरित गरेको हत्या(हिंसा, आतंकमा प्रत्यक्ष परोक्ष सहभागीमा पर्न गएको खुशीको भाव र उक्त घटनाका पिडीतहरूमा दुखी हुदा बदलाको भावना बाट विकसित हुँदै यो एक घातक मनोरोग बन्न पुगेको हो।
यो नेपालमा मत्र नभई विश्वमा बढदो सम्स्या बन्दैछ जसले मानिसमा हुने स्वभाव “मानवता“को संवेदनशीलतामा ह्रास ल्याउदैछ । यो मन्दविषले त्यही दिन देखि गति लिएको हो जुन दिन देखि राजनीतिक क्रान्तिको नाममा एक मानवले मानवता त्यागेर मानव र मानवताको हत्या(हिंसा गर्न थाल्यो । त्यही दिन देखि धार्मिक र शैक्षिक सामाजिक संस्थाको आफ्नो कार्यक्षमतामा ह्रास हुँदै गएको पनि मान्न सकिन्छ । यस प्रकारको मनोबैज्ञानिक त्रुटिलाई न्युनिकरण गर्न धार्मिक र शैक्षिक संस्थाहरूमा स्वस्थता र पवित्रता पूर्वक कार्यगर्नसक्ने सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ।
धर्म र शिक्षाको परिचय, परिभाष , क्षमता, विशेषता र यसले समाजको सामाजिक संरचनामा खेल्न सक्ने भूमिका र यिनिहरूले गर्नसक्ने प्रकार्यवादको क्षमताको शुद्धतामा कमिआउन दिनु नहुने कुरालाई विशेष ख्याल राख्नु पर्दछ । धर्म र शिक्षालाई व्यक्ति वा समाजको दैनिक क्रियाकलाप संग जोडनु पर्ने हुन्छ । यसको सुरूवात व्यक्ति बाटै हुनु पर्दछ वा संरचना बाट नै। व्यक्तिको सोचले संरचनाको परिचय र सहमति निर्माण गर्ने हुन्छ । भने संरचनाले पनि व्यक्तिको संस्कार र नियमको निर्माण गरेको हुन्छ । सुक्ष्मता बाट जाँदै गर्दा पहिले निस्वार्थ मानवता भावलाई आफुमा त्यो हाँसो(खुशीका साथ जीवित र सकृय रख्न जरुरी हुन्छ ।
केही उपाय हरूमध्य विश्वासका साथ धर्म विज्ञान, आध्यात्म विज्ञान, प्रेम विज्ञान लगायतमा हार्दिक मन, वचन र कर्म लगाउनु नै हो । आजै देखि विभिन्न घटना बाट पाठ सिक्दै आफ्नो मनोविज्ञानको उपचार गर्नेतर्फ नलागे एक दिन आफ्नै संतानकालागि आफु धेर हुने दिन आउने छ । त्यो विषय तब महसुस हुनेछ जब बुढेसकालमा आफुले जन्माएको सन्तानले सडकाको पेटिमा, चौतारीमा वा वृद्धाश्रममा छोडेर “Take your time mom and dad I hope both of you well take care well after me ” जब भन्नेछ अनि आफ्ना बिगतको सबै कुरा झलझली आउनेछ । हो हिजोको आफ्नो मन, वचन र कर्मले आजको परिवेश निर्धारण गरेको हुन्छ त्यसरी नै आजको ले भोलिको भविष्य निर्धारण गर्ने हुन्छ । त्यसैलाई ऐतिहासिक सन्दर्भको सिद्धान्त मान्न सकिन्छ जो भूत, वर्तमान र भविष्य एक अर्कामा गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ र मानिएको छ ।
यति मात्र हैन कि हरेक कुरा हरेक संग सम्बन्धित हुन्छ र निर्धारीत हुन्छ भनेका छन् । यस विषयमा माक्र्सले माक्र्सवादमा ऐतिहासिक द्वन्दात्मक भौतिकवादमा स्पष्ट पारेका छन् भने र अल्बर्ट आन्स्टाईनले सापेक्षताको सिद्धान्त नै प्रतिपादन गरेका छन् । हरेक कुरामा, कार्यमा तर्क हुन्छ त्यही तर्कले भविष्य निर्माण गर्ने हुन्छ । कस्तो भविष्यको निर्धारण भन्ने विषय चै उक्त तर्कमा रहेको गुणस्तरको स्तरले निर्धारण गर्ने हुन्छ । आजै देखि समाजिक संस्थाहरू विशेषगरेर धर्म र शिक्षा स्वास्थ बनाएर तिनलाई नियमित कार्य गर्न नदिने हो भने भविष्यमा मानिस त रहला तर मानव सभ्यता, समाज र सामाजिक सभ्यता नै संकटमा पर्न सक्छ ।
आजै देखि चिन्तन र अध्ययन थालौ सामाजिक संरचनात्मक प्रकार्यवादमा धर्मरशिक्षा भनेको के हो ? धार्मिकरशैक्षिक संस्थाका काम, कर्तव्य र विशेषता के हो ? यसको नियमित सक्रियताले समाजमा कस्तो सुव्यवस्था कायम गर्न सक्छ र यसको अनियमितता ले समाज कसरी चल्ने रहेछ भन्ने विषय सोच्न जरुरी छ ।
-लायन्स क्लब अफ चौदण्डीगढी (Lion Club of chaudandigadhi), उदयपुर
← हजारौ शुभेच्छुकबीज वडाध्यक्ष मगरको अत्येष्टि
चाैदण्डीगढीमा भाेली शाेक विदा →
कोरोना(१९, मानव सुरक्षा र सम्मान,
७ बैशाख २०७७, आईतवार १३:२७ Rajendra Rai 0
क्वारेन्टाईन र आईसोलेसनको बारेमा
१७ चैत्र २०७६, सोमबार ०७:१४ Rajendra Rai 0
‘मेरो संघर्षको कथा’
२६ फाल्गुन २०७६, सोमबार १६:०२ Rajendra Rai 0